Khuphela -Shenzhen PUAS Industrial Co, Ltd.
I-OEM / ODM
Amandla e-R & D
I-PUASeyasekwa ngo-2001 eyayiyi-Global Leading Manufacturer yeProAV PTZ kunye neNkomfa ye-AV Camera kunye noMboneleli weSisombululo ngo-2001. Sidibanisa i-R & D, uyilo, imveliso kunye nentengiso. Iimveliso zethu zisetyenziswa ngokubanzi kwiNkqubo yoSasazo, iNkomfa ye-AV, iSifundo kunye neMfundo, iTelemedicine, ukuSasazwa ngokuBukhoma kweVidiyo kunye noMsitho, uNxibelelwano oluNgxamisekileyo, unxibelelwano oluManyeneyo kunye nokuSebenzisana, iNkqubo yeMultimedia.
● I-PUAS ijolise kuphuhliso kunye nophando lobuchwephesha bekhamera yemibala ye-HD ukusukela oko yaqalwa. I-PUAS ixhomekeke kuphando olunamandla lwenzululwazi yeqonga, ifumene izatifikethi ezininzi zepatent kunye nesatifikethi selungelo lokushicilela. Kwaye ine-algorithm ezizimeleyo ezingundoqo kunye nenzuzo yekhamera ye-HD kwicandelo lobuchwephesha bobuchwephesha, njengokugxila kwe-auto, ibhalansi emhlophe yemoto, auto iris, ukunciphisa ingxolo ye-3D njalo njalo.
● I-PUAS Ihlala isebenza kumbandela wokubambisana wokuba "iTrust iphuma kunxibelelwano", imamela imfuno yomsebenzisi, igcina iphucula umsebenzi wemveliso, isiphumo kunye nemfuno esemgangathweni ngenkcitho ebiza kakhulu kunye nenkonzo ekumgangatho ophezulu, ukuphumelela ukuthembela kunye nenkxaso yabathengi behlabathi.
● I-PUAS inesimo sokuziphatha esivulelekileyo kwaye inika abathengi behlabathi ngeendlela zokusebenzisana ezifana neearhente, i-OEM kunye ne-ODM. Thatha iimfuno zabathengi njengesikhokelo kwaye usebenze nzima ngokudibeneyo ekuphuhliseni ukukhuthaza itekhnoloji yeshishini.
Ikhamera ye-PTZ yosasazo
Inkomfa yeekiti ze-PTZ
Umhlangano wekhamera ye-PTZ
Inkonzo ye-OEMM ye-OEM
Usasazo kunye nokusasazwa okubukhoma